Ubuntu | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Ukucoceka kwekhaya
Ukufakela: ukwenza izandla zabo. Umyalelo wesinyathelo-nge-nyathelo, iteknoloji kunye neengcebiso
Eli nqaku lichaza ngokweenkcukacha onke amanqanaba endlela owenziwe ngayo amatye eepavumente. Imiyalelo thaca ingqalelo yakho kuya kukunceda uqonde iimpawu zeteknoloji yale nkqubo. Ukulungiselela ukuqonda kwengcaciso ...
I-decorative stone plaster yokuhlobisa ingaphakathi: ukujonga ngokubanzi, iintlobo, iimpawu kunye nokuphononongwa
Kwiminyaka yakutshanje, ilitye lokuhombisa le-gypsum lihlala lisetyenziselwa ukuyila izinto ezininzi zangaphakathi. Le nto ihlala ihleli kwaye ibukeka buhle kakhulu iyaziwa ngokusebenza kwayo. Ke ngoko, ayimangalisi into yokuba imbali yayo ibuyela umva kumawaka eminyaka ...
Iidayimitha ze-drill zetsimbi I-Drill isethi
Isigcini somsebenzi wegcisa lasekhaya kunye neengcali kufuneka zibe nezixhobo eziyimfuneko emsebenzini. Iziphumo zokugqibela zixhomekeke kumgangatho wazo zonke izixhobo kunye nezinto ezisetyenzisiweyo emsebenzini. Ezahlukeneyo…
Izikrini zokuzibamba zeprofayili yomileyo: ubukhulu, i-GOST, ukhetho
Ukukhawulezisa izinto ezininzi zokwakha, izixhobo ezikhethekileyo ezinomsonto zisetyenzisiweyo. Izikulufu zokuzibamba kwiprofayile eyomileyo yeentlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Ukukhetha kwabo kuxhomekeke kuhlobo lweemakhishithi kunye nendawo yofakelo. Ukwazi ...
Yenza ngokwakho i-smeshariki eyenziwe ngemifuno kunye neziqhamo-ubuchule obungaqhelekanga, izimvo kunye nenjongo
Phantse wonke umntu ubukele ikhathuni emangalisayo "Smeshariki" ubuncinci kube kanye. Abantwana abancinci bayayithanda le khathuni. Abalinganiswa bakhe, i-smeshariki, eyenziwe kwimifuno kunye neziqhamo ngezandla zabo, bobuchule obukhulu ...
Uyakwenza njani itayili ngokwakho?
Njengoko usazi, namhlanje imoto ayikho obutofotofo, kodwa imfuneko yokwenene, kwaye ngamanye amaxesha kakhulu etsolo. Kwangelo xesha, izithuthi zala maxesha ziye zenze iinguqu ezibonakalayo kunye nonyaka, ziphucula ...
Zingaphi ngaphantsi kwendawo yokutshiza. Iintlobo zezilwanyana, iteknoloji
Xa beqala ukulungisa indlu, abanini bezindlu kunye nezindlu bahlala becinga malunga nokuba kuya kuthatha ixesha elingakanani kwezi zinto. Ixesha lokusebenza kwiimeko ezininzi yinto engalindelekanga. Njengomnye ...
Akvafumigator "Raptor": ukuhlaziywa. I-Fumigator evela kwiindlovu, izimbungulu, izintuthwane, iimbonyi, iimpukane, umlingo
Into eyingozi nengathandekiyo njengokuvela kwezinambuzane eziyingozi endlwini yenzelwe ukuphelisa iindlela ezininzi ezahlukeneyo. I-Aquafumigator "Raptor", uphononongo kunye nolwazi malunga nokufumana kweli nqaku, lidume kakhulu ...
Clematis: i-spring trim kunye nokunyamekela
Kukho iintlobo ezingama-300 zeClematis. Ayothusi into yokuba ukhathalelo lwabo lwahlukile. Ke ndifuna iclematis ukuba idubule ixesha elide, ineentyatyambo ezininzi, umbala wawo ubukhanya ngakumbi. Akukho nzima ukuyenza le. Ufuna nje ...
I-Beard Trimmer: Iingcebiso zokukhetha
Umatshini wokubhala yinto engenakuphinda ibuyiselwe kwindoda yanamhlanje. Yinto efanelekileyo, esebenzayo yokucheba iinwele. Ingasetyenziselwa ukucheba iindevu, ukubetheka ecaleni, amashiya. Ukongeza, isixhobo sikhuselekile ngokupheleleyo, asibangeli ...
I-Pampas utshani: umhlobiso wesiza sakho
Abantu abanesabelo somhlaba wabo kwaye abawusebenziseli injongo yokusebenzisa kuphela kufuneka babe nomdla kakhulu kwingca ye-pampas - ifoto ibonisa ngokucacileyo indlela esi sityalo esihombise ngayo. Ngokwenzululwazi ibizwa ...
Iingubo ze-Hydrophobic zenze ngokwakho
Ukufuma okuphezulu lutshaba oluphambili lweendawo ezininzi okanye izakhiwo. Kubo bonke ubukho bayo, uluntu lusoloko lusilwa umzabalazo ongabonakaliyo nalo. Kwaye kudala kwafakazelwa: eyona nto ilungileyo ikunye naye ...
Indlela yokukhulisa i-thuja kwimbewu ekhaya?
I-evergreens inomtsalane kakhulu kwimimandla yokuhombisa umhlaba. Ingakumbi ukuba awuzibekeli usukelo lokufumana isivuno. IConifers kunye nemithi yecypress ifuna ukugcinwa kancinci kunemithi enqabileyo; abachaphazeleki kangako zizitshabalalisi ...
I-do-yourself-yourself-decor. Iimpawu zokubhabisa isithombe
Ukuhonjiswa kwegumbi le-DIY yeyona ndlela ilula yokwenza ikhaya lakho libe nesitayile kwaye lihle. Ndiyabulela kwesi siganeko silula, ungaliguqula ngokupheleleyo ikhaya lakho kwaye ulwenzile lube lolokuqala. Zininzi izinto onokukhetha kuzo ...
I-Lupine ikhula ukusuka kwimbewu kunye nokunakekelwa
ILupine sisityalo esisuka kusapho lweembotyi, igama laso "Lupinus" liguqulelwe ngokusuka kwisiLatin njenge "ingcuka". Akucaci ukuba kutheni enikwe igama elinje, mhlawumbi ukumila kweentyatyambo, ezifanayo ...
Kutheni le nto ii-anthuriums zingadubuli? Anthurium - ukukhathalela njani? Anthurium - iintyatyambo
Iintyatyambo, kubandakanya neentyatyambo zangaphakathi, zihlala zinikwa abantu basetyhini. Nangona kunjalo, kukho ukungabikho phakathi kwabo, okujoliswe ngokukodwa kubantu. Oku kubandakanya i-anthurium. Unabantu abaninzi ...
Izityalo zomoya. Izityalo zomoya zomoya. Amandla omoya
Ukukhangela eminye imithombo yamandla, ubuntu buye phambili. Umzekelo, amandla elanga ayanda ukusetyenziswa, iifama zomoya ziyenziwa. Ngokufanelekileyo, ngumoya onokuthi uthathwe njengeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana amandla ombane - ...
Indlela yokwenza i-orchid ibonakale kaninzi ngonyaka?
Iiorchids mhlawumbi zezona ntyatyambo zintle emhlabeni, ukugqibelela kwazo kuyamangalisa! Ndifuna ukujonga ezi zidalwa zibalaseleyo zendalo ngokungapheliyo, kwaye ilusizi kangakanani ukuba ixesha lifikile kwaye ziyaphela. Kwabaninzi ...
Umxube weBordeaux: ukulungiselela nokusetyenziswa
Izinambuzane kwizitiya zegadi, igadi yemifuno, izidiliya sisibetho sokwenyani sabanini. Ukuze ulwe nabo, kufuneka uchithe ixesha elininzi kunye nomzamo. Umxube weBordeaux unokuba luncedo kumzabalazo onje, ...
Yintoni urea? Sitshela ngokulula kwaye sithengekayo
Yintoni urea kwaye yintoni imbali yemvelaphi yayo? Kutheni ibizwa njalo, isetyenziswa phi? Masizame ukufumanisa. Imbali yokufunyanwa kwe-urea Kuya kuvela ukuba inxulumene ngqo nomchamo. Kwi-1773, amaFrentshi ...
Page 1 Page 2 ... Page 73 Okulandelayo Page
Imibuzo ye-56 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,916.